राशिफल Archives - Online Tamang
असार १३ बाट यी राशी मालामाल हुने ! हेर्नुहोस् कुन राशी हुनेछन् कंगाल !शौर्य, साहस, बल, पराक्रमको प्रतिनिधि ग्रह मंगल आषाढ १३ बाट आफ्नो उच्च राशि मकरमा राशी परिवर्तन गर्दै छ। लगभग तिन महिना पछि मंगल ग्रहले रशी परिवर्तन गर्न लागेको हो। यस क्रममा विभिन्न राशिलाई फरक-फरकका लाभ मिल्ने हुन्छ। यदि कोहि व्यक्ति मंगलको महादशा, अंतर्दशा देखि ग्रषित रहेको छ भने यस अवस्थामा झन् धेरै दुख खेप्नु पर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा मकर राशिमा शनि ग्रह पनि रहको हुँदा जून २७बाट मंगल ग्रह र शनि ग्रह सँगै एउटी राशिमा हुनेछन्। शनि ग्रह र मंगल ग्रहसँगै एउटी राशिमा हुनुलाई धेरै अशुभको रुपमा लिईने गरिन्छ। मंगल ग्रहको रशी परिवर्तन ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी बुधवार जून २७को दिन हुनेछ। यस क्रममा राशि अनुसार मिल्ने फल निम्न अनुसार रहेको छ। मेष राशि यस रशी परिवर्तनको क्रममा मंगल मेष राशिको दशम स्थानमा रहने छ। यस राशि
Posted in राशिफल, रोचक खबर
तपाई कुनै काम गर्दै हुनुन्छ भने वार र राशी अनुसार काम गर्दा तपाईलाई फाइदा मिल्छ । हिन्दुधर्म शास्त्रका विभिन्न धर्म ग्रन्थ र वास्तु शास्त्रले कुनै कामको शुभ फल र लाभका लागि केही प्रावधान गरेको छ । जस अनुसार तपाईको खानपान, हिडडूल, कामको शुरुवात लगायतका विषय रहेका छन् । तपाईले बार र समयलाई ख्याल गरेर यी काम गर्दा फाइदा पुग्छ आइतबार: आइतबार राज्याभिषेक गर्ने , गीत, वाध्य, पलाकिमा बस्ने, राजसेवा, गाइगोरु, किन(बेच गर्ने , हवन गर्ने, मन्त्र–उपदेश गर्ने, औसधि निर्माण गर्ने, शास्त्र ,सुन, तामा, उनि, बस्त्र आदि किनबेच गर्ने रातो बस्तुको कारोबार उपयुक्त हुन्छ । सोमबार: यज्ञ गर्नु गराउनु, गाइ, भैसी, घोडा, फूल, घास, वृक्ष्य, मोति, चादी आदिको किनबेच गर्नु, स्त्रीको संगत गर्नु उपयुक्त हुन्छ , मंगलबार: यसबारमा भेद गर्नु , अनैकतिक काम गर्न, शास्त्रबर्धन, संग्राम, कपट, दम्भ, सैन्य राख्नु , स
वास्तुशास्त्रको अनुसार घरमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भाग भान्साकोठालाई मानिन्छ । घरमा कयौँ रोग र चिन्ताको कारया भान्सामा भएको वास्तुदोष हुनसक्छ । वास्तुशास्त्र अनुसार यदि तपाइर्ले गलत दिशातर्फ फर्केर खाना बनाउनुभयो भने तपाईको परिवारमा सुख तथा समृद्दि रहनेछैन । त्यसोभए कुन दिशातर्फ फर्केर खाना बनाउने त ? तल पढ्नुहोस्ः १.उत्तर पश्चिम दिशातर्फ फर्केर खाना पकाउनाले घरको सुख(शांति भंग हुन्छ, यसले घरमा झैझगडा र कलहको सम्भावनालाई बढाउँछ । २.वास्तुशास्त्रमा भनिएको छ कि यदि उत्तर दिशातर्फ फर्केर खाना बनाउनाले व्यापारमा लगातार नोक्सान हुन्छ र सार्थ सम्पत्तिको पनि हानि हुन्छ । ३. दक्षिण दिशातर्फ फर्केर खाना पकाउनाले घरका महिलाहरु चिन्तित रहन्छन् र उनीहरुलाई पटक पटक डाक्टरकहाँ जानुपर्ने स्थिति बन्छ । ४. जुन घरको किचेनमा व्यक्ति पश्चिम दिशातर्फ फर्केर खाना बनाउँछ त्यस घरको मानिस रोगबाट ग्रसित हुन्
७ वटा बार मध्ये कुन बार जन्मिएका मान्छे ले कति धन कमाउछन् ? कति सफल हुन्छन ? हेर्नुहोस आफ्नो भाग्यपरिक्षा आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने ज्योतिष शास्त्रीको दावी छ । कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य थाहा पाउनुस् । आइतबारः पुरुष आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । त
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – सोच र विषयवस्तुप्रति मन केन्द्रित हुनेछ । गोपनीय ढंगले गरिएको कामबाट मनग्ये फाइदा हुनेछ । सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ । पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ । बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिने छ । रचनात्मक कार्यमा जुट्दा प्रशस्तै फाइदा हुने समय छ । गुरुजनको विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ । आजका लागि शुभअङ्क १ र शुभरङ्ग हलुका नीलो वा हरियो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ०७ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – प्रभावशाली र ठूला मानिसको सहयोग जुटाउन सकिन्छ । आमाको सहयोगबाट फाइदा मिल्नेछ । सामाजिक कार्यले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ । तर, स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । सम्झौताले खिन्नता बढाउनेछ भने बुद्धिको उपयोगले लक्
भोलिबाट २८ मे सम्म यी दुइ राशिको भाग्यमा शुखको वर्षात हुने!मिल्नेछ अत्याधिक लाभ! आज सोमबार हो, सूर्यको आफ्नो चाल परिवर्तन भएको छ। आज अधिक मासको पहिलो सोमबार हो। अधिक मास भगवान कृष्णको महिना हो भने सोमबार शिवजीको बार हो। जसका कारण विशेष प्रकारको संयोगहरु बन्ने हुन्छ। यहि महिना शिवजीको पूजा आराधना गर्नाले हरेक इच्छा पुरा भएर जाने हुन्छ भने श्रीकृष्णको आराधना गर्दा भने मुक्ती मिल्ने हुन्छ। अबको एक लगभग एक हप्ता निम्न उल्लेखित राशिहरुलाई फाइदा हुने वाला छ। हेर्नुहोस्: मेष यस राशी हुनेहरुको कुण्डलीमा चन्द्र चौथो भावमा रहनाले लाभ मिल्ने हुन्छ। तपाईलाई घर-परिवारबाट हरेक कार्यमा भने जस्तै सहयोग मिल्न सक्ला। घर-परिवारबाट व्यवसायमा समेत साथ मिल्ने देखिन्छ। यस समयमा अत्याधिक शुख-भोग गर्ने अवसर मिल्न सक्ला। भौतिक,आधात्मिक,सामाजिक,आर्थिक,पारिवारिक शुखको भोग गर्न पाउदा तपाईको मानसिक अवस्था समेत आनन
वि.सं. २०७५ ज्येष्ठ ०८ गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१८ मई २२ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य उत्तरायण, गृष्म ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (अनलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:१४ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:४८ बजे, इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:०८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:३८ बजे, पोखरा, कास्की, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:१८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:५५ बजे, ज्येष्ठ शुक्लपक्षको अष्टमी तिथि, मध्यरात्रीपछि १२:०५ बजेसम्म, त्यसपछि नवमी तिथि, मघा नक्षत्र, मध्यरात्रीपछि १२:०२ बजेसम्म, त्यसपछि पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र, चन्द्रमा सिंह राशिमा (अहोरात्र व्याप्त), ध्रुव योग, बिहान ०७:०२ बजेसम्म, त्यसपछि व्याघात योग, विष्टि (भद्रा) करण, दिउँसो ०१:०८ बजेसम्म त्यसपछि बब करण, आनन्दादि योग : कालदण्ड, चन्द्रवर्ण : रातो, चन्द्रदिशा : पूर्व, योगिनीदिशा : ईशान, वारशूल : उत्तर,
-आजको राशिफल, वि.सं. २०७५ ज्येष्ठ ०७ गते सोमबार / २०१८ मई २१ तारीख
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – मातृधनको उपयोगबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिने छ । पशुधन र जमिनबाट पनि सामान्य फाइदा होला । बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ । काममा मातापिताको सहयोग प्राप्त होला । कृषि–चौपायाबाट लाभ मिल्नेछ । नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । स्थायी सम्पत्ति जोड्ने समय छ । आजका लागि शुभअङ्क ४ र शुभ रङ्ग रातो वा पहेंलो रङ्ग हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ नमश्चण्डिकायै यस मन्त्रको कम्तीमा ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – रोजगारी र व्यापार÷व्यवसायमा आज विशेष महत्वको दिन हुनेछ । पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ । प्रतिस्पर्धी परास्त हुनेछन् । आम्दानी बढ्नेछ । कृषिक्षेत्र वा घरपरिवारमा देखिएका चुनौतीको निवारण गरिने छ । दाजुभाइ र बन्धुबान्धवका काममा सहभागी बन्नुपर्ने देखिन्छ, त्यस्
आजको राशिफल – वि.सं. २०७५ ज्येष्ठ ०७ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१८ मई २१ तारिख
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – मातृधनको उपयोगबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिने छ । पशुधन र जमिनबाट पनि सामान्य फाइदा होला । बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ । काममा मातापिताको सहयोग प्राप्त होला । कृषि–चौपायाबाट लाभ मिल्नेछ । नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । स्थायी सम्पत्ति जोड्ने समय छ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – रोजगारी र व्यापार÷व्यवसायमा आज विशेष महत्वको दिन हुनेछ । पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ । प्रतिस्पर्धी परास्त हुनेछन् । आम्दानी बढ्नेछ । कृषिक्षेत्र वा घरपरिवारमा देखिएका चुनौतीको निवारण गरिने छ । दाजुभाइ र बन्धुबान्धवका काममा सहभागी बन्नुपर्ने देखिन्छ, त्यस्तै सामाजिक कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नु पर्नेछ, जसबाट सम्मान प्राप्त हुनेछ । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) – काम र पठन–पाठनमा लगनशील बन्न नसक्ता अरूले आलोचना गर्न
-भगवान शिवले यी ३ राशि भएका व्यक्तिमाथि सबैभन्दा बढी बर्साउने गर्छन आफ्नो कृपा,
भगवान शिवले यी ३ राशि भएका व्यक्तिमाथि सबैभन्दा बढी बर्साउने गर्छन आफ्नो कृपा भगवान शिवजीले सबै भक्तजनहरुलाई आफ्नो आशिर्वाद र कृपा दिने गर्छन। तर सबै राशि मध्य केहि यस्तो राशि पनि छन् जसलाई भगवान शिव आफ्नो विशेष कृपा राख्दछन। आउनुहोस जानौ भगवान शिवका सबैभन्दा प्रिय राशि कुन-कुन हो। वृष राशि : यस राशिको जातलाई मंगल एकदम राम्रो मानिन्छ। वृष राशिको मानिस भगवान शिवको स्वरूपको निकै नजिक हुन्छन। यस राशिको मानिस चाहे दुखमा होस वा सुखमा सधै भगवानको जप गर्ने गर्छन जसकारण भगवान शिव यिनीहरुको हरेक कामना पुरा गर्ने गर्छन। यस राशिका व्यक्ति सोमबार शिव मन्दिर गएर शिवलिंगमा जल चढाउनु निकै शुभ मानिन्छ। कर्कट राशि : वृष राशि पछि कर्कट राशि माथि भगवान शिव निकै खुशी हुन्छन र आफ्नो कृपा पनि बर्साउछन। यस राशिको मानिस शिवको भक्तिमा सधै तलिन रहन्छन। यस राशिको मानिस भगवान शंखरको कुनै पनि व्रत वा चाडपर्वमा
पीडामा हुनुहुन्छ १० मिनेटको यो भिडियोले तपाइँलाई आनन्द दिनेछ पुरा हेर्नुस (2)